VaTsvangirai Vokurudzira Kubatwa Zvakanaka kweVakwegura
Mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vanoti munyika dzakawanda pasi rose vanhu vakwegura vave kuwanikwa vave vakawanda kupfuura vechidiki, nokudaro zvakakosha kuti hurumende itore matanho ekuti vanhu vakwegura ava vararame hupenyu hwakanaka
Vachitaura pakurangarira zuva reWorld Health Day muMaglas Stadium kuZvishavane neChishanu,VaTsvangirai vakarudzira vanhu vose kunyanya vechidiki kuti vaite zvese zvavanogona kuchengeta hama dzavo dzakwegura vachiti vanhu vakwegura vanopa hama dzavo rudo uye rudo urwu rwunofanirwa kuratidzwawo kuvanhu vakwegura ava.
VaTsvangirai vati vanhu vakwegura vave kuwanda kupfuura vechidiki munyika dzakawanda pasi rose vakati kunyange hazvo nyika isina mari, zvakakosha kuti hurumende ive nemitemo inoita kuti vanhu vakura vawane mari yemudya ndigere.
VaTsvangirai vati vanhu vanofanirwa kutambira kugwegura senzira yehupenyu uye vasetsa vanhu apo vataura kuti kukwegura kwemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, hakufanirwe kutorwa sekurwara.
VaTsvangirai vati chimwe chezvinhu zvagonekwa nehurumende yemubatanidzwa kusvika pari zvino, kusimudzira nyaya yezvehutano vakati hurumende inokoshesa zvehutano hwevanhu nekuti hapana chingafambe kana vanhu vasina hutano.
VaTsvangirai vati zvakakosha kuti vanhu vakwegura vawane chikafu chakakwana. Vaenderera mberi vachiti nekuda kwekuti nzvimbo dzakawanda munyika hadzizi kuzowana goho rakanaka, hurumende iri kuita zvose zvainogona kuti pasave nevanhu vanofa nenzara.
Mumiriri weWorld Health Organisation muZimbabwe, Doctor Custodia Mandlhate, avo vataurawo pagungano iri, vatiwo nekuda kwe HIV/AIDS, vanhu vakwegura vakawanda ndivo vari kusara vachichengata nherera.
Doctor Mandlhate vati vakwegura vane zvakawanda zvavanobatsirawo mubudiriro yenyika vakatiwo zvakakosha kuti vachengetwe zvakanaka
Gurukota rezvehutano, Dr Henry Madzorera, avo vange varipowo pachiitiko ichi, vatiwo kucherechedza zuva rezvehutano kwakakosha nekuti kunopa mukana wekuzivisa veruzhinji pamusoro pezvirwere zvakasiyana-siyana uye kunobatsirawo kuti hurumende iwane mukana wekuwana rubatsiro munyanya dzezvehutano kubva kumasangano akasiyana-siyana.
Gurukota revashandi vehurumende, Amai Lucia Matibenga, nemutevedzeri wegurukota rezvemabasa nekugara kwanaka kwevanhu, Amai Monica Mutsvangwa, ndevamwe veavo vange varipowo pachiitiko ichi.